Gandaki Sanchar » दर्शककाे मन जित्दै अमेरिकन बाेइज !
दर्शककाे मन जित्दै अमेरिकन बाेइज !
काठमाडाैं/ यसअघि त्यति चर्चामा नरहेका निर्देशक प्रवेश पौडेल र उनकाे फिल्म ‘अमेरिका बोइज’ले दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छन् । निकै हाेहल्लाका साथ फिल्म रिलिज गर्ने चलन छ । तर, अमेरिका बाेइज सुटुक्क रिलिज भएकाे थियाे ।
यस्ताे अवस्थामा पनि जति दर्शक हलमा अाइपुगेका छन्, त्याे अत्यन्त सुखद रहेकाे मान्छन् निर्देशक पाैडेल । फिल्म शुक्रबारदेखि चल्दैछ । सिंगल थियटर र मल्टिप्लेक्स दुवै खाले हलमा फिल्मले भिड जुटाएकाे खबर अाएकाे छ ।
शुक्रबार र शनिबार हलहरुमा हाउसफुल काराेबार गरेकाे फिल्म युनिटले अवगत गराएकाे छ । अधिकांश दर्शकले फिल्म रमाइलो रहेकाे प्रतिक्रिया दिएका छन्। करिब २ घन्टा १० मिनेट लामो फिल्ममा डिभी परेको झुठाे खबरले छाएकाे परिवारकाे खुसी कसरी अन्तै माेडिन्छ, हेर्न पाइनेछ । फिल्ममा बेराेजगार युवा र उनीहरूकाे विदेश पलायनकाे विषय समेटिएकाे छ ।
अमेरिकाकाे डिभी पर्याे भन्दै घरबाट ३–३ लाख रुपैयाँ मगाएर काठमाडाैंमा मोज गर्ने तीन फरक युवाको कथालाई हास्यात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। वास्तवमा फिल्ममा पस्किएका मसलाले गर्दा कहीकतै दिक्क र अल्छी मान्ने दृश्य नभेटिने दर्शककाे प्रतिक्रिया छ ।
‘अमेरिका बोइज’ प्रवेश पौडेलको निर्देशकका रूपमा डेब्यु फिल्म हाे। अर्पण थापा, अभय बराल र अाशीष प्रसाईंको मुख्य भूमिका छ फिल्ममा । यी तीन पात्रले दर्शकलाई हँसाउँदै अन्त्यमा रुवाएका छन् । सृष्टि केसी, हरिहर शर्मा, सुनिल थापा, सन्दीप छेत्री, कामेश्वर चौरसिया, शारदा गिरी, रश्मी भट्ट, रमा थपलिया लगायत कलाकारको पनि यसमा अभिनय छ।
प्रकाश भुजेल र ईन्द्रप्रसाद खरेलको संयुक्त लगानीमा बनेकाे फिल्ममा विवेक पाण्डेकाे लेखन, अालाेक शुक्लाकाे छायांकन र निमेष श्रेष्ठकाे सम्पादन रहेकाे छ ।
प्रकाशित मिति २० जेष्ठ २०७५, आईतवार ०६:५१